चर्चित गायक डि.बी.निरंकारीले ल्याए बर्षकै उत्कृस्ट तिज गीत - Samata Khabar
६ श्रावण २०७५, आईतवार १८:४८
नेपाली गित सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल चर्चित गायक डी.बी. निरंकारी एस बर्षकै उत्कृस्ट तिज गीत बजारमा ल्याएका छन् । बिगत लामो समय देखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा क्रियासिल डी.बी. निरंकारी दर्जनौं लोकप्रिय गीतहरु बजारमा ल्याई सकेका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा न.१२ मा जन्मिनुभएका डी.बी.निरंकारी बिगत केहि समय देखि काठमान्डौ बस्दै आउनु भएको छ ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई आफ्नो कर्म क्षेत्र बनाई जिबनको अन्तिम पल सम्ममा पनि नेपली गित संगीत क्षेत्रमा लागिपरिरहने डी.बि.ले बताउनु भयो । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफ्ना धेरै अमुल्य कृतिहरु बजारमा रहेको र जस्तै : डिजे बजैदे ,बबालै नाचाउछु,मेरी काली,भैसो अड्कियो,मुम्बई राम्रो छ,तिम्रो चर्चा,युनिक बुडी, पाउजु बजाउदै जस्ता दर्जनौ गित बजारमा रहेको र यहि आउदो महिलाहरुको महान पर्ब हरितालिका तिजको अबसरमा पनि आफुले आफ्ना दर्शक श्रोताहरुलाई छुट्टै मनोरंजन दिने क्रममा यो बर्षको तीजमा पनि आफ्नो दुईवटा गीतहरु बजारमा ल्येराउने पनि जानकारी दिनुभएको छ ।
आफ्नो तिजको गितहरु बजारमा रहेका अन्य गितहरु भन्दा फरक धारमा रहेर आफुले गित तयार गरेको र सो गीतमा सब्द गोपाल बिसी र संगीत डी.बि.निरंकारी स्वमको रहेको छ ।
धनगडी थर्काउने बोलको गीतमा मोडल,रामजी खाड,सलिना नेपालीले अभिनय गर्ने भएका छन् । त्यसै गरि अर्को गीत तिम्रो नाचभन्दा मेरो नाच के कम छ बोलको उक्त गीतमा सब्द गोपाल बिसी र संगीत डी.बी. निरंकारी स्वमको रहेको छ । भने उक्त गीतमा अभिनय भने अन्जली अधिकारि,सशान्त साहु को रहेको बताउनु भएको छ ।
धनगडी थर्काउने उक्त गीतमा स्वर डी.बी. निरंकारी,सलिना नेपाली को रहेको छ भने अर्को गीत तिम्रो नाच भन्दा मेरो नाच के कम छ बोलको गीतमा स्वर डी.बी. निरंकारी,मधु क्षेत्रिको रहेको बताउनु ब्झेको छ ।
दुई गितहरु मध्ये तिम्रो नाच भन्दा मेरो नाच के कम छ सो गित भने रक्षा मुय्जिक प्रा.लि.ले बजार ब्यबस्थापन गर्ने भएको छ ।
उक्त दुई गितहरु चाडै बजारमा ल्याउने गायक डी.बी.निरंकारीले आर एम खबर लाई बताउनु भएको छ । अन्तमा आफना शुभ चिन्तक हरुले आफना गीता संगीतप्रति केहि कमि कमजोरी भएमा सल्लाह सुझाबका लागि आफुलाई सिधै सम्पर्क पनि गर्न सक्ने बताउनु भएको छ गायक डी.बी.निरंकारी मोबाईल नम्बर ९८४८९९७५२६ र ९८१४६६०५४८ मा गर्न सक्नु हुने छ ।
भिडियो हेर्न तलको लिंकमा हेर्नुहोस